संघीयताको अतिले भविश्यमा नेपाल रहँदैन | Indrenionline.com
नेत्रविक्रम चन्द, महासचिव, नेकपा माओवादी
संघर्षलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राखेर हेर्नु हुँदैन । देश र जनताको समस्या के छन्, त्यसको समाधान र निकास के हुन सक्छ, संघर्षको स्वरूप त्यसैले निर्धारण गर्ने हो ।
नेपाल अहिले पनि नवऔपनिवेशिक अवस्था, विदेशीको दबाब, हस्तक्षेप र उत्पीडनमा छ, त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । जनता पुरानो राज्यसत्ताको नियन्त्रण वा अधिनायकत्वभित्र रहेकाले उनीहरूका नैसर्गिक र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेका छैनन् । जनतालाई त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
यसैको लागि हाम्रो संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ६० वर्षदेखि नै यो संघर्ष जीवित छ । कहिलेकाहीं यो संघर्ष अन्तक्र्रियामा रहन्छ, कहिले सडक संघर्षसम्म पुग्छ भने कहिलेकाहीं राज्यसत्ता निर्माणको चरणसम्म । त्यसको लागि संघर्षका विभिन्न स्वरूप प्रयोग भएका छन् । खास विन्दुमा जनताले सशस्त्र विद्रोह गनुपर्ने परिस्थिति पनि बनेको छ ।
माओवादीसँगका सहमति उल्टाएर र विस्तृत शान्ति-सम्झौतालाई लत्याएर त्यसको केन्द्रीय मर्मअनुसार काम नभएकैले जनताले अर्को एउटा विद्रोह आवश्यक महसुस गरेको परिस्थिति छ । त्यो विद्रोह राज्यले लिने नीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनताले सामान्य रूपमा भनेर नसुन्ने राज्यसत्ताका क्रियाकलाप रहेको अनुभूति हामीलाई मात्र नभई सबैलाई भएको छ ।
जनअधिकारको सुनिश्चितता र राज्य निर्माणको लागि संघर्षको घेरा ुसशस्त्रु सम्म गएको इतिहास छ, नेपालमा अहिले त्यो अवस्थासम्म जाँदैन भन्न सकिन्न । अधिकार सुनिश्चिताको लागि जनता एकपटक फेरि विद्रोहमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौं ।
यो सही कुरा हो, तर त्यो नकारात्मक शिक्षाको रूपमा । समग्रतामा त्यो सही होइन । हरेक संघर्षले सापेक्षित सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको छ । तर त्यसले आमूल परिवर्तन गर्ने ध्येयलाई भेट्न सकेको छैन । त्यो कुरा साँचो हो । जब विद्रोही नेता वा अगुवाले आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‌याउन सक्दैन तत्पश्चातको परिणाम आउने त्यस्तै हो ।
यदि आन्दोलन सफलतामा पुगेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो, त्यो आन्दोलन पूर्णतामा जान्थ्यो । त्यतिबेलाको आन्दोलनका अगुवा अहिले पछाडि फर्केका छन् । जनअधिकारको संघर्षलाई रोक्न मिल्दैन ।
राणासँगको संघर्ष एउटा खास समयमा अवरुद्ध भयो, यसको मतलब त्यसलाई जनताले छोडिदिए भन्ने हुँदैन । एउटा निश्चित अवधिपछि जनता नयाँ प्रक्रियामा जान्छन् । अहिले पनि हामी त्यही अवस्था देख्छौं । माओवादीलाई विभिन्न ढंगले घेराबन्दी गरेर पछाडि त हटाइएको छ तर जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
त्यसैले उनीहरूले फेरि समाधानको बाटो पकड्छन् । हामीले ठीक ढंगले नेतृत्व गर्दा जनता अगाडि आउने हो । जनता तयार भएपछि जुनसुकै आन्दोलनको भार पनि थेग्न सक्छन् भन्ने इतिहाससिद्ध तथ्य हो ।
नेपालको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो सही थियो । दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी हुनु राम्रो थिएन । त्यो कुरा हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं । हामीले रोल्पामा पाँचबुँदे सहमति गर्‌यौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौं, नेपालभित्रै समझदारी हुनुपर्छ ।
दिल्लीमा समझदारी गरिएको विषय भएकाले अहिले समीक्षा गर्दा त्यसभित्रै पराजयको जरा देखिन्छ । दलहरूसँग मिलेर आउने राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले गलत थियो भन्ने होइन । घुमाएर जसरी त्यहाँ पुर्‌याई भित्री चाल चालियो, त्यो आजको परिणामको लागि जिम्मेवार छ भन्ने देखियो ।
भारतको मध्यस्थतामा भएको भनिएको बाह्रबुँदे समझदारीले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो देखिन्छ कि कमजोर ?
यो त भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आइको लडाइँ जस्तै हो । समग्र आन्दोलन हेर्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकातिर लडिरहेको छ भने अर्कोतिर सत्तापक्ष छँदैछ ।
राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदीलाई लगाउने आरोप र मोदीले गान्धीलाई लगाउने आरोप सत्ताभित्रका विभिन्न टकराव मात्रै हुन् । संविधान संशोधन विधेयक र आन्दोलनलाई हामीले संसद्वादी राजनीतिको एउटा संकट मात्र भनेका छौं । नेपालको राजनीति र नेताहरू धेरै कमजोर, परनिर्भर र पराश्रित हुँदै गएको यसले पनि सावित गर्छ ।
हामी अहिले स्वतन्त्र आन्दोलनको अगुवाइमा छौं ।
घटनाक्रमले विभिन्न विषयमा नजिक ल्याउने र टाढा लैजाने भइरहन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ र असल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरेर देशको नेतृत्व गर्ने तहमा लैजानुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो सबै नेताहरूसँग छलफल चलिरहन्छ । अहिले तत्कालको सहकार्य उहाँहरूसँग छैन ।
तपाईं र बाबुरामबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा निकट हो ?
यो कुरा व्यक्तिसँग सम्बन्धित जस्तो हुन्छ । हामीले अहिले जे गर्दैछौं, त्यसभित्र मेरो दृष्टिकोण आन्दोलन र टिमभित्रै छ । आन्दोलन पार्टी र जनतासँग सम्बन्धित भएकाले पार्टी भनेको टिम हो ।
राजनीतिक ढंगले हामी सबै एक ठाउँमा आउँदा माओवादी आन्दोलनलाई मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ उचाइमा ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । त्यसबारेमा हामीले नेताहरूलाई भेट्दा भनेका पनि छौं( व्यक्तिविशेषमा हाम्रो कुनै महत्त्वाकांक्षा, पूर्वाग्रह वा संकीर्णता छैन, उहाँहरूले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ । तर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ठाउँसम्म लैजानुपर्‌यो भन्ने मात्र हो, हाम्रो स्वार्थ । संयोगले हामी सबैले एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने मौका पाइयो र तपाईंले भन्नुभएजस्तो अवस्था आएछ भने त्यसबाट पछाडि हट्ने अवस्था आउँदैन ।
तपाईंहरूले पहिचानसहितको संघीयता छोडिदिनुभयो । नेपालमा संघीय संरचना जरुरी छैन ?
वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा संघर्ष गर्ने जिम्मा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै नभई उत्पीडित जाति र वर्गको पनि हो । समाजवादको निम्ति गरिने संघर्ष र समाजवादको रक्षाको निम्ति उत्पीडित वर्ग र जातिले अझ जोड दिनुपर्छ । पुँजीवादभित्र संघीयताको नारा लगेर अन्योलमा पर्न दिनु हुँदैन ।
मधेसमा सामन्त, जमिनदार र दलाल हावी भई देशलाई नै अलग बनाउने विषयले मधेसी जनतालाई झन् उत्पीडनको भुमरीमा धकेल्छ । मधेसी जनताले अधिकार चाहन्छन् भने उनीहरू वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिमा आउनुपर्छ, जमिनदार र दलालको नारामा भुल्नु हुँदैन । समाजवादी आन्दोलनको वास्तविक दृष्टिकोण भनेकै यही हो ।
हामीले संघीयताको विरोध गरेका होइनौं, तर नेपालको वस्तुस्थितिमा स्वायत्त शासन सबैभन्दा राम्रो हो । नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादभित्र उत्पीडित जातिको स्वायत्त शासन नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । संघीयतालाई अहिले अर्को ुअतिु मा लगिएको छ ।
नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने डिजाइनमा विभिन्न खालका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यही अतिमा लैजान खोजेका छन् । यसबाट नेपाल त रहँदैन नै, नेपाली जनताको मुक्ति त झन् टाढाको विषय भइहाल्यो । आदिवासी जनजाति पनि आफैं अर्काको गुलाम र उपनिवेशमा बदलिने राजनीतिमा जानु हुँदैन ।
त्यस्तो उत्पीडन भएको मधेसलाई अहिलेको आन्दोलनले सम्बोधन गर्नै सक्दैन । राणा, पञ्चायत, बहुदलमा त्यो वर्गले मधेसी जनतामाथि शासन गरेको थियो । अहिले त्यही वर्गले मधेसमा उग्र नारा दिएर मधेसी जनतालाई हरुवा(चरुवा, सुकुमवासी र गुलाम बनायो । मधेसमा उत्पीडक शासक वर्गले नेतृत्व गरेको छ, उत्पीडितले होइन । हाम्रो आन्दोलन भनेको उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति हो । क्षेत्रीय र जातीय नाराबाट उनीहरूको उत्पीडनको मुक्ति सम्भव छैन ।
धर्म मान्नु हुँदैन । धर्म छँदै छैन किन मान्ने रु अबको पुस्तालाई विज्ञान पढाउनुपर्छ, ज्ञानको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । दुनियाँमा हुँदै नभएको झूटो भ्रममा हिँड्न दिनु हुँदैन । अहिलेसम्म दमन गर्नेमध्येको एउटा हतियार धार्मिक हो भनेर जनतलाई अपिल गर्नुपर्छ । दमन गर्ने हतियारबाट जनता बाहिर आउनुपर्छ, यो धर्म वा त्यो धर्ममा होइन । धर्म भनेको जनतालाई उत्पीडन गर्ने एउटा हतियार हो र भ्रमजाल हो । भगवान् हुन्छ भने बोक्सी पनि हुन्छ ।
यी सबै कुरा गलत हुन् । जनताले आस्था र संस्कारको रूपमा मान्छन् भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । साम्राज्यवादीहरूले नेपाली जनतालाई फुटाउन धार्मिक, जातीय र गैरसरकारी संस्थाको हतियार प्रयोग गरेकाले हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । अल्लाह छन् भने प्रभु पनि छन्, प्रभु छन् भने भगवान् पनि छन् । छैन भने केही पनि छैन । एउटा ठीक अर्को बेठीक कसरी हुन्छ रु यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन ।
अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकसँग माओवादीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
प्रस्तुतिः चिरञ्जीवी ढुंगाना /रेवती सापकोटा